I-duodenitis kukudumba okanye ukucaphuka kwe-duodenum. I-duodenum yinxalenye yokuqala yamathumbu amancinci kwaye ingaphantsi kwesisu.
Yintoni eyandisa umngcipheko we-duodenitis?
I-Duodenitis phantse ihlala ibangelwa yintsholongwane ebizwa ngokuba yi-Helicobacter pylori (H pylori). Ezi zilandelayo zingakhokelela kwi-duodenitis:
Usulelo lwebhakteria, ukungunda, okanye intsholongwane
Ukugula okanye uxinzelelo olukhulu
I-nonsteroidal anti-inflammatory pain isusa, i-aspirin, okanye amayeza e-steroid
Ukusetyenziswa kwecuba okanye iimveliso zotywala
Imitha yonyango lomhlaza
Ukulimala esiswini sakho okanye emathunjini amancinci
Into eyityhefu oyiginyeyo, enjengebhetri-yesimbo sebhetri
Ziintoni iimpawu ze-duodenitis?
Awunazo iimpawu, okanye unakho oku kulandelayo:
Iintlungu zesisu ezinokuziva ngathi zibuhlungu
Intlungu yesifuba okanye isiyezi
Ukudumba okanye igesi
I-duodenitis ichongwa njani?
Ugqirha wakho uya kukubuza malunga neempawu kunye neempawu zakho kwaye akuvavanye. Uya kudinga iimvavanyo ukuqinisekisa ukuba unayo intsholongwane. Unokufuna naluphi na unyango olulandelayo:
I-endoscopy Isetyenziselwa ukubona ukuba kukho iingxaki esiswini sakho okanye kwi-duodenum. Ugqirha wakho uya kusebenzisa i-endoscope (ityhubhu enokukhanya kunye nekhamera ekugqibeleni) ngexesha lenkqubo. Unokuthatha isampulu kwi-duodenum yakho kuvavanyo.
Uvavanyo lwegazi zingasetyenziswa ukubonisa usulelo.
Uvavanyo lokuphefumla Ingabonisa ukuba i-H pylori bacteria ibangela i-duodenitis yakho. Uya kunikwa isiselo esingamanzi. Emva koko uphefumlela engxoweni. Ugqirha wakho uza kulinganisa isixa sekharbhon diokside ekuphefumlweni kwakho. Imali eyongezelelweyo ithetha ukuba unesifo se-H pylori.
Isampula yestool Inokuvavanywa kwiibhaktheriya ezinokubangela i-duodenitis yakho.
Ngaba unyango lwe-duodenitis?
Iimpawu zakho zinokuhamba ngaphandle konyango. Unokufuna unyango ukuba iimpawu zakho zinzima okanye zinganyangeki. Unyango luya kuxhomekeka kwinto ebangela ukuba ube ne-duodenitis. Ugqirha wakho unokucebisa utshintsho kumayeza owasebenzisayo. Amayeza anokumiselwa ukuba ancede ukunyanga usulelo lwebacteria okanye ukunciphisa isisu esiswini.
Ndingenza ntoni ukulawula okanye ukunqanda i-duodenitis?
Musa ukutshaya. I-Nicotine kunye nezinye iikhemikhali ezikwi-cigarettes nakwi-cigar zingonakalisa imithambo yegazi kunye nemiphunga. Buza ugqirha wakho ngolwazi ukuba ngaba uyatshaya ngoku kwaye ufuna uncedo ukuze uyeke. I-E-cigarettes okanye icuba elingenamsi lisenayo inicotine. Jonga ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa ezi mveliso.
Nciphisa okanye ungasebenzisi utywala. Utywala bunokuyenza mandundu i-duodenitis yakho. Jonga nogqirha wakho ukuba ufuna uncedo ukuze uyeke ukusela utywala.
Musa ukuthatha ii-NSAID okanye i-aspirin ngaphandle kokuba uyalelwe ukuba wenze njalo. Ezi ntlungu kunye neyeza ezifanayo zingabangela ukucaphuka. Kungangcono ukuba uthatha ii-NSAID ngokutya, kodwa ngekhe ubenako ukuzithatha konke konke.
Musa ukutya ukutya okubangela ukucaphuka. Ukutya okufana neeorenji kunye nesalsa kunokubangela ukutsha okanye iintlungu. Yitya ukutya okusempilweni okwahlukeneyo. Imizekelo ibandakanya iziqhamo (hayi i-citrus), imifuno, iimveliso zobisi ezinamafutha asezantsi, iimbotyi, isonka sengqolowa, kunye nenyama kunye neentlanzi. Zama ukutya iinxalenye ezincinci kwaye usele amanzi kunye nokutya kwakho. Musa ukutya nantoni na ubuncinci iiyure ezi-3 ngaphambi kokulala.
Gcina iibhetri kunye nezinto ezifanayo kude nokufikelela ebantwaneni. Iintsana zihlala zifaka yonke into emilonyeni yazo ukuze ziphonononge. Iibhetri ezinamaqhosha kulula ukuzigwinya kwaye zinokudala umonakalo omkhulu. Tape amaqweqwe eecomputer zeebhetri zezixhobo ze-elektroniki ezinje ngolawulo olukude. Gcina iibhetri kunye nezinto eziyityhefu kwindawo apho abantwana bangenakufikelela khona. Sebenzisa izitshixo zokhuselo okanye izitshixo ukuze abantwana bangakwazi ukufikelela kwizinto eziyingozi.
Unentlungu ebuhlungu esiswini.
Unegazi, umnyama, okanye ilindle okanye ukugabha.
Unempawu ezintsha okanye ezimbi, nasemva konyango.
IZIVUMELWANO NGOKUKHATHALELA KWAKHO:
Unelungelo lokunceda ekucwangciseni inkathalo yakho. Funda konke onako malunga nemeko yakho kunye nendlela yokuyinyanga. Xoxa ngonyango olukhethayo kunye noogqirha bakho ukuze bathathe isigqibo ngenkathalo ofuna ukuyifumana. Usoloko unelungelo lokwala unyango olu lwazi lusetyenziselwa ukufundisa kuphela. Ayenzelwanga ukukunika ingcebiso ngonyango malunga nesifo okanye unyango. Jonga ugqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
iintlungu ezisezantsi kubantwana abajonga iimpawu
iqhuma elilukhuni kwindinyana engasemva
itenolol 50 mg ithebhu
icebo b cvs coupon
khangela isikhombisi sepilisi